Muuqaal Fudud oo Fudud - Calaamadaha Dijitaalka ah iyo Softwareka Video-ga ah
Digital Calaamadaha & Video Wall Software
Xalka ugu jaban ee suuqa!
Xarunta Taliska & Dab-demiska
Muraayadaha Soo-dhaweynta Dijitaalka ah
Dharka & Tafaariiqda
Makhaayadaha & Makhaayadaha
Iskuulada & Waxbarashada
Dab -damiska & xarumaha samatabbixinta
Cellarman & Wine Maqaayada
Dukaanka Qaybaha Gawaarida
Kooxaha Farmashiyaha & Farmashiyaha
Isbitaalada & Adeegyada Gurmadka
SAXIIXA SAXIIXA SIGTAL
Digital Signage software ee ganacsiyada
KU SAABSAN FUDUD EE CUDURKA MULTI
Sidee Way Fududeysaa Muujinta Muujinta Badan
Haddii aad tahay ganacsi yar ama shirkad weyn, Easy Multi Display waa aalad calaamado dijitaal ah oo ka dhigaysa mid fudud in lagu soo bandhigo multimedia-gaaga bandhigyo badan.
1 liisanka caadiga ah, waxaad ku muujin kartaa ilaa 24 ilo kala duwan oo warbaahineed hal mar, guud ahaan 6 bandhigyo kala duwan. Nagala hadal xalka shirkadeena ee xulashooyinka soo bandhigida aan xadidneyn.
Muuqaal Fudud oo Fudud, macaamiil kastaa waa mid u gaar ah waana tan sababta aan uga dhigeyno hal dhibic si aan u siino adeeg 100% loogu talagalay oo loogu talagalay macaamiisha kasta!
KALSOONID tijaabo bilaash ah
Hel Helitaan Degdeg ah
Muuqaal Fudud oo Fudud ayaa ah software ugu fiican ee calaamadaha dhijitaalka ah urur kasta oo doonaya inuu u soo bandhigo macluumaadka dijitaalka ah macaamiishooda iyo martidooda.
Hoos guji si aad wax badan uga ogaato.
Dukaamada Dharka & Tafaariiqda
Daawada & Caafimaadka
Sidee u isticmaali doontaa
Muuji Kartida Badan?
Nala soo xiriir si aan uga wada hadalno
MAXAA US RABO?
Inta badan tartamayaasheena waxay qaataa lacag dhan € 30 daqiiqad kasta, bishii. Sidaas darteed, waxaad bixineysaa in ka badan € 360 sanadkii hal shaashad uun! Qaar kamid ah tartamayaasheena ayaa waliba ku weydiinaya inaad iibsato softiweerad dheeri ah oo qiimahoodu yahay 1200 euro oo jeebka laga qaato. Iyada oo la adeegsanayo Easy Multi ማሳያ, waxaad bixinaysaa hal mar.
Fudud Multi DISPLAY
U adeegso illaa 6 bandhig oo aan kharash dheeraad ah lahayn.
Ma jiraan kharashyo socda ama khidmad bille ah.
U isticmaal kumbuyuutarkaaga gaarka ah inaad ku shaqeyso softiweerka.
Looma baahna internet.
Qiimaha ayaa ku kordha tirada muuqaalka.
Bixi khidmadaha bilkasta.
Soo Iibsiga ciyaartooy koox saddexaad ah si ay u maamulaan softiweerka.
Adeeg ku saleysan daruur oo u baahan internet.
Adiga oo dooranaya Easy Multi ማሳያ, waxaad badbaadin kartaa 250 € bishii, taasi waa 3000 € sanadkii sanadkii xalka saxiixaaga dijitaalka ah.
FARSAMADA FUDUD EE CUDURKA MULTI
La bilaabo websaydhyada, soo qulqul fiidiyaha, oo soo bandhig fiidiyowyada maxalliga ah, sawirro iyo muusig.
Bixi hal mar liisankaaga Muujinta Muujinta Badan ee fudud oo weligaa isticmaal.
Way fududahay in la isticmaalo fur-furka iyo ciyaarista softiweer. Looma baahna qalab xisbi saddexaad oo murugsan.
Waxaan bixinnaa taageero aad u wanaagsan. Raadi noo saldhiga cilmiga, ama na weydiiso tababar gaar ah.
Software wuxuu kusocdaa mashiinka deegaankaaga. Looma baahna internet ama shabakad daruur adag oo loo baahan yahay.
Iyada oo la adeegsanayo laysanka shirkadaada, xitaa waad soo bandhigi kartaa oo maamuli kartaa barnaamijyo kale oo softiweer ah!
WAA MAXAY Macaamiishayadu dheh
Kahor inta aanaan qorin menusyadayada dushooda. Waxay ahayd mid hawl badan isla markaana saameyn aan yarayn ku yeeshay. Iyada oo la adeegsanayo Easy Multi Display, isla markiiba waxaan qabsanaa dareenka macaamiisheenna.
Maamulaha Brewery, Brussels
EMD waxay leedahay qiimo jabin kara dhammaan tartamada! Qiimaha waa mid faa'iido badan mana jiraan ajuuro qarsoon. Kooxda EMD si weyn ayey wax uga qabtaan una tixgeliyaan baahiyadayda oo dhan.
Maamulaha guryaha, Louvain-la-Neuve
Sida magaca tilmaamayso, EMD way fududahay in la isticmaalo. Waxba kama aqaan kombiyuuterka. Iyada oo loo adeegsado EMD waxaan u leenahay xalka si fiican loo habeeyey xafiiskayaga ilkaha.
Dhakhtarka ilkaha, Brussels
Bil kasta, In kabadan 150 meherado ayaa adeegsanaya softiweerkeena si ay u soo bandhigaan muuqaalkooda, muuqaalkooda, iyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin websaydhka si kor loogu qaado loona xayeysiisto ganacsigooda.
Waxaan ugu yeernaa fudud muuqaallo badan maxaa yeelay kicitaanka iyo socodsiinta a
xalka saxeexida dhijitaalka ah way nala fududahay.
Wax walboo aad ubaahantahay inaad bilowdo ...
Kombiyuutar leh kaarka naqshadeynta - kaasoo awood u leh adeegsiga shaashado badan.
Inbadan oo TV-yada ah ayaad ugu baahantahay nidaamkaaga soo bandhigida.
Fudud Software Multi Masawir fudud.
Ma jiro kharashyo qarsoon.
Majiro khidmada bil kasta.
Qalab qalafsan oon lahayn.
Hal liisan ah oo aan lahayn wax lagu daro ama kor u qaadis ah.
ka reebid. VAT *
1 Shatiga Software
Ku muuji 1 shaashadda illaa 4 aagag warbaahineed oo gaar ah
Cusbooneysiinta Software-ka Cloud ee 12 Bilood
Helitaanka Shabakadda Maxalliga ah
Soo Bandhigida Qorsheynta
Tababbarka khadka tooska ah ee khadka ka yimaada
Naqshadeynta Software Sameysan
Xulashadayada ugu caansan.
Ku muuji 6 shaashad ilaa 24 aagag warbaahineed oo gaar ah
Helitaanka Shabakada Maxalliga ah (waxay u baahan tahay 2 shati: PC Server iyo Ciyaartoyda PC)
Rakibaadda & Taageerada Goobta
Xirmooyinka barnaamijyadeena dhameystiran iyo adeegyada.
From € 899 celiso. VAT *
Qaar ka mid ah adeegyada loo heli karo macaamiisheena ganacsi:
Helitaan taageero farsamo oo fog
Nala soo xiriir maanta si aan ugala hadalno baahiyahaaga.
* Lacag dheeri ah oo sanadle ah ayaa la dabaqi karaa oo keliya haddii aad iska qorto annaga Ikhtiyaari ah heshiiska dayactirka. Riix halkan si aad u hesho war dheeraad ah.
Waa fududahay in la isticmaalo Interface
Macaamiisheena kaliya waxay jecel yihiin sida ay u fududahay inay ku soo bandhigaan warbaahintooda Easy Multi Show. Interface-ka softiweerka wuxuu kugu hagiyaa habka qaabeynta talaabo talaabo talaabo ah, adiga oo ku weydiinaya su'aalaha saxda ah oo dhan.
Uma baahnid inaad noqotid guruug tiknoolaji ah si aad u kacdid oo aad ula socoto Easy Multi Display. Tani waa sababta barnaamijkeenu u yahay ka software ugu fiican ee calaamadaha dhijitaalka ah
Waxaa ku dhex yaal saaxirka muujinta
- saaxir The Easy Multi Display wuxuu kugu haggaayaa habka dejinta.
Kaydi qaabeynta badan
- Badbaadinta qaabab badan oo muuqaal ah oo si fudud ugu dhaji.
- Xulista luqadda: Ingiriis, Faransiis, Isbaanish, Shiino, Deutch oo socda ...
Ma u baahan tahay caawimaad dheeri ah oo dheeri ah? Waxaan ku bixinnaa tababbarka on-site ama goobta ah iyo taageero softiweer, fadlan nala soo xiriir!
KALSOONID DARRO FARSAMADA FUDUD EE BILAASH MULTI
Tusaale farmasiga iyo 4 shaashad
MUUQAALKA MUUQAALADA OO DHAN
Marabtaa dalabyo gaar ah & qiimo dhimis?
Isku qor warsideheena oo keydi.
Waxaan kuu soo diri doonnaa wargeysyo mar mar ah iyo koodh-dhimis. Waligiisna uumambeyn doonno, kirayn doonno ama iibin mayno macluumaadkaaga.
Virtual Cockpit Boqortooyada Ingiriiska oo ay Kooban Tahay
EMD waxaa loo qaybiyay EEC-ga TekAngel
Guy (+ 33) 679075519
📬 kala xiriir@easy-multi-display.com
Tilmaanta Tilmaanta Isticmaalaha Muujinta ee Multi-Mult V2
Sideen U Muujiyaa dallacsiinta?
Sidee loo adeegsadaa kontoroolka fog?
Sidee loo Muujiyaa farriinta qoraalka?
Sidee loo adeegsadaa 2 shaashadood oo ah WIN10?
Sidee loo Muujiyaa dhowr fiidyow oo midba midka kale ka dib?
Sidee loogu soo bandhigayaa isla sawir dhowr dukaanno ah?
Sidee loo Muujiyaa faylashaada Powerpoint?
Waa maxay deked bandhig?
Immisa Muuqaal Fudud ayaa kaa caawin kara inaad horumariso muuqaalkaaga xogta?
Maxaad u dooranaysaa nidaamka calaamadaha dijitaalka ee bannaanka ah?
Waa maxay qalabka calaamadaha dhijitaalka ah ee aan isticmaalo?
7 faa iidooyinka Display Digital
Sidee loogu adeegsadaa calaamadaha dhijitaalka ah dukaankaaga dawada?
| Xuquuqda daabacaadda © Muuqaal Fudud oo Fudud 2021 Saxeexyada Dijitaalka ah & Fiidiyowga Muuqaalka Muuqaalka ah ee Ganacsiyada |
Waxaa suuro galiyay Ku biir.chat
Waa salaaman tahay, magacaygu waa Guy Condamine, oo ah aasaasaha EMD, aan wada sheekaysanno.
La xiriir oo dalbo xigasho ...